Naya Bikalpa | सतर्कता बढाएर लकडाउन खुकुलो पारौं - Naya Bikalpa सतर्कता बढाएर लकडाउन खुकुलो पारौं - Naya Bikalpa
सतर्कता बढाएर लकडाउन खुकुलो पारौं
प्रकाशित मिती: २०७७ जेष्ठ १२, १०: ११: ३०
सरकारले लकडाउन गरेको आज ६३ दिन भयो। देशका नाकाहरु बन्द छन्। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा ठप्प छ। तर पनि देशमा संक्रमितहरुको संख्या दिन दिनै बढ्ने क्रम जारि छ। हाल सम्म नेपालमा संक्रमितहरुको संख्या ६५४ पुगिसक्यो भने मृत्यु हुनेको संख्या ३ छ। आशा गरौँ यो संख्या यतिमै सिमित रहोस। गत वर्ष चैतदेखि सुरु भएको लकडाउन अझै जारि छ। अझ कति दिन हुने हो टुंगो छैन। दिनभरी काम गरेर बिहान बेलुकीको छाक टार्न पर्ने वर्ग देखि लिएर अब मध्यम वर्ग समेतलाई परिवार पाल्न गाह्रो हुन थालिसक्यो। येतिखेर जनताको प्रश्न भनेको लकडाउन कहिले सम्म?
अब सरकारले लकडाउन बढाउने होइन उच्च सतर्कता अपनाएर लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजानु पर्छ। सधै भरी लकडाउन गर्नु समस्याको समाधान होइन। इटाली, स्पेन, अमेरिका, जर्मनी लगायतका विश्वका थुप्रै देशहरुले सामाजिक दुरी कायम राखेर, सतर्कता अपनाएर जन-जीवन अब बिस्तारि सामान्य बनाउन खोज्दैछन्। हाम्रो जस्तो बिकशोंमुख देशमा दुई महिनासम्म लकडाउन गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो असर पार्नु हो। अब सरकारले लकडाउन बढाउने तिर आफ्नो स्रोत र साधन खर्च गर्नु भन्दा अब आगामी दिनको लागि उचित योजना बनाएर जन जीवन सामान्य बनाउने तिर लैजानु पर्छ। चरणबद्ध रुपमा योजनाहरु ल्याउनु पर्छ। त्यसको लागि अन्तरिक आवतजावत सुचारु गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय नाका खोल्न तत्काललाई हतार नगर्ने। छिमेकि राष्ट्र संगको बोर्डर क्षेत्रमा क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने नियम कडा रुपमा लागु गर्ने। यसरी सिमामा रहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्न सकिन्छ भने अन्य देशहरुमा रहेका कामदारहरु जसले बिदेशमा काम गुमाइसकेका छन् र आफ्नो सरकारले कति खेर आफुहरुलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न दिने हो भनेर बसेकाहरुलाई पनि बिस्तारि नेपाल आउने बाटो खुलाउनु पर्छ तर क्वारेन्टिन र परीक्षण अनिवार्य गर्न सक्नु पर्छ।अबका दिनमा लकडाउन बढाउने होइन परीक्षण बढाउने हो। तर त्यो इमान्दारी रुपमा हुनु पर्यो।
अर्को भनेको सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि छुट्टै कोष खडा गरेर सरुवा रोग नियन्त्रणलाई व्यवस्थित बनाउन आवस्यक छ। यसपालिको बजेटमा पनि सरुवा रोग नियन्त्रणको शिर्षकमा बजेट छुट्टाईइनु पर्छ र यसलाई निरन्तरत दिन सक्नु पर्छ। हरेक वर्ष स्वस्थ र शिक्षामा अर्बौं बजेट छुट्टाईएको हुन्छ तर खोई त कहाँ प्रयोग हुन्छन् ति बजेट? एउटा गतिलो प्रयोगशाला समेत छैन। नेपालको स्वस्थ क्षेत्र कति कमजोर र अस्त ब्यस्त रहेछ भन्ने कुरा कोरोनाले छर्लंग देखाईदिएको छ। सरकारले जति भाषण गरेपनि उसको क्षमताको अड्कल सबैले गरिसकेका छन्।आपतकालीन समयमा सरकारको तयारी, महामारी नियन्त्रणमा सरकारको तयारी सबैको सच्चाई उजागर भैसकेको छ। यदि सरकारले भाषण गरेजस्तो काम गर्न सकेको भए पटक पटक गरि महिनौ महिना सम्म खाली लकडाउन मात्र गरिरख्दैन थियो। योजना बनाएर महामारी नियन्त्रण गर्नेतिर लाग्नेथियो। अब त परीक्षण गर्ने सामान पनि अभाव हुन थालेको छ। आडिटि टेस्ट गरेर बसेकाहरुको पीसीआर हुन नसक्दा झापामा संयौं अलपत्र छन्। न क्वारेनटिनमा बसेकाहरुको राम्रोसंग व्यवस्था हुन सकेको छ न परीक्षणको दायरा बढेको छ। व्यापक रुपमा परीक्षण मात्र गर्न सकेको भए पनि को संक्रमित छ को छैन भन्ने कुराको यकिन हुन सक्थ्यो र त्यहि अनुरुप योजना बनाउन सकिन्थ्यो। तर यहाँ लकडाउनको समय बढाउने भन्दा अरुको लागि छलफल भएको छैन। सिमामा जनता अलपत्र, बिदेशी भूमिमा अलपत्र, स्वदेशमै भएकाहरुको पनि अब बिहान बेलुकी छाक टार्न मुस्किल भैसकेको छ। त्यसैले सरकार अब योजना ल्याऊ, लकडाउनको विकल्प खोज, देशलाई सामान्यतिर लैजाऊ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाऊ।
२०७७ जेष्ठ १२, १०: ११: ३०